1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP Tune UP Project | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
1954-1964 Evinrude futhi Johnson 5.5 HP esasinenjini isikebhe motor Model Yereferensi. Inombolo imodeli ngokuvamile ogibele port uhlangothi injini ubakaki. Uma une inombolo yohlobo, ukuthola ngonyaka umshini wakho ku Model Yereferensi.
Lapha iyona uhlu izingxenye uzodinga kutsha yakho 1954-1964 Evinrude futhi Johnson 5.5 HP esasinenjini isikebhe motor.
Landela le nqubo kutsha up 1952-1967 Evinrude noma Johnson 3 HP motor yakho esasinenjini. Leli khasi eziningi izithombe, izincazelo, kanye neseluleko sendlela uthole lezi izinjini egijima kahle. Wena iyothathwa igxathu negxathu ngenqubo kokwenza tune up on umshini wakho.
Hlola futhi 5.5 HP Johnson 1960 Model CD-17 Iprojekthi nguBosse "Bo" uPeterson - eStockholm, eSweden
Isixwayiso Esitholakala Kokwenzeka Mayelana Umfutho Okokhelekayo Amathangi - Lawa ma-motors asebenzisa amathangi kaphethiloli acindezelwe. Esikhundleni sokumunca uphethiloli ethangini, ipayipi lomugqa omabili lifaka umoya ungene ethangini, liwucindezele liye ku-4-7 PSI ephoqa uphethiloli ukubuyela emotweni. Ngokuyisisekelo, la mathangi acindezelwe ayingozi yomlilo noma yokuqhuma eyingozi. CHOFOZA LAPHA ukuze ufunde kabanzi mayelana nalezi amathangi nendlela ukuguqula nezintsha ephephile fuel amathangi.